မေစစ်ပိုင်| November 6, 2012 | Hits:1,797
0 | | CNG ဓာတ်ငွေ့သုံး ခရီးသည်တင် ကားတစီး (ဓာတ်ပုံ – မေစစ်ပိုင် / ဧရာဝတီ)
မလေးရှားတွင် အဖမ်းခံထားရသည့် မြန်မာများလည်း သီတဂူ ပြန်ခေါ်မည်
မသန်စွမ်း ဥပဒေမူကြမ်း ၂၀၁၄ နှစ်ဆန်းတွင် လွှတ်တော်တင်မည်
Your email address will not be published. Required fields are marked *	Name * Email * Website Comment tunaungko November 6, 2012 - 5:30 pm	သတင်းရေးတာ ခြေခြေ မြစ်ြ်မစ် မသိဘဲ ရေးတဲ့ ပုံစံ ပေါက်နေ ပါတယ် ။ စီအင်ဂျီ အသစ်ချ မပေး တာ ၂၀၀၈ ။ခုနှစ်ကတည်း ကပါ ။ ဒီကြား ထဲမှာ ခရီးသည်တင် ဘပ်စ်ကား တချို့တော့ စီမံချက်နဲ့ တင်ပေးတာ ရှိခဲ့ပါတယ် ။
Reply	Yangonite November 7, 2012 - 9:24 am	That’s why, we need to expose and get rid of those corrupt officials (especially worse are ex-soldiers) who are not only wasting the ordinary citizens’ hard-earned money but also greatly impeding the president’s self-proclaimed march towardsatruly democratic society. The level of avarice of such malevolent officials is simply astounding and also deleterious to the whole society and its mores. The attitude, “if you don’t pay or buy from my company, I will make you spend more money by having you procure unnecessary items”, is way beyond corruption on the part of this official. In fact, I can’t help thinking that jealousy, and subsequently sabotage, is the most striking trait of Burmese people these days, sadly.
Reply	moepwint November 7, 2012 - 8:13 am	စီအင်ဂျီကားဟောင်းအပ်ပြီးရင် …. အဲဒီကားအစား ကားသစ်ကို စီအင်ဂျီပြန်ပေးတာ